SIDEE LOO SIIYAA SAXARADA PHALAENOPSIS SAXDA AH INTA LAGU JIRO UBAX IYO DIB-U-TALLAALID KA DIB: DARYEELKA UGU WANAAGSAN EE LOOGU TALAGALAY ORCHID PHALAENOPSIS GURIGA OO LEH XAD-DHAAF IYO LA'AANTA QOYAAN - SOOSAARKA DALAGGA
Waxaa muhiim u ah nolosha orchid - sida loo isticmaalo biyaha Phalaenopsis?
Oralid Phalenopsis waa mid ka mid ah dhirta kulaylaha ee ugu caansan koray guriga.
Si ubaxkan casriga ah loo helo waqti dheer, waxaad u baahan tahay inaad raacdo xaalado yar oo fudud, gaar ahaan waraabinta. Biyaha waa arrin aad u muhiim u ah horumarinta dhirta, iyo qodobkan ayaa ka doodi doona waraabinta habboon ee noocan oo kale ah orchid.
Muhiimadda ku habboon waraabinta
Orchid waxaa loo tixgeliyaa ubax jilicsan, laakiin nooc ka mid ah phalaenopsis waa wax aan la qabin, laakiin waa in la xusuusnaado in nidaamka xididkiisu uu ka duwan yahay guryaha caadiga ah. In qaab qaldan ee orchid waraabinta si deg deg ah u engegay oo u dhintaan.
Intee jeer ayaa hababka loo fulin karaa?
Qalabka fasalka xannuunku wuxuu u dulqaadanayaa qalajinta muddo dhowr maalmood ah oo ka fiican qoyaanka joogtada ah. Feejignaanta waa in la siiyaa substrate ee dheriga iyo lafdhabarta lafteeda: waa lagama maarmaan in la biyoodo oo keliya haddii ciidda iyo derbiyada dheriga gebi ahaanba qalalan yihiin. Celcelis ahaan, mudada udhaxeysa waraabka ayaa u dhaxaysa 3 maalmood xagaaga ilaa usbuuc jiilaalka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in la siiyo mudnaanta qoyaanka subixii.
Waxyaalahee ayaa ka fiican in tan la sameeyo?
Qodobada soo socdaa waxay bixiyaan jawaabaha su'aalaha caadiga ah ee mawduucan.
Miyaan u baahanahay halaboor gaar ah ee waraabinta? Marka loo eego xaaladaha dabiiciga ah, orchids waxay qoyaan ka soo baxaan roobab kuleyl ah, sidaas awgeed biyaha ayaa ku fiican qoyaanka.
Waa maxay biyaha ay doortaan? Biyaha waa inay noqdaan kuwo jilicsan: haddii ay adag tahay, markaa dhirta ayaa daciifin doonta sababtoo ah milixda xad-dhaafka ah, sababtoo ah dabeecada waxay ka timaaddaa roobab kuleyl ah. Haddii biyuhu ka yimaadaan biyaha biyaha la saaro, markaa waa la karin karaa ama waxay istaagi kartaa dhawr maalmood.
Sidoo kale, biyaha loo isticmaali doono in lagu mayrto orchid waa inay ka diirran yihiin heerkulka qolka 2-4 darajo. Heerkulkani wuxuu ka caawin doonaa ubaxa inay si firfircoon uga shaqeeyaan burooyinkeeda iyo caleemaha. Dheecaannada qabow, phalaenopsis waxay u nugul yihiin cudur waxayna gooyaan.
Maxaa lagu dari karaa orchids koritaanka wanaagsan? Si koritaanka wanaagsan ee warshadda, waxaad isticmaali kartaa dhaymada 1-2 jeer toddobaadkii inta lagu jiro muddada koritaanka daaqsinka firfircoon. Waxa kale oo aad ku dari kartaa qoyan oxalic lagu qasi jiray biyaha oo ah saamiga 1:10.
Siyaabaha wejiyada kala duwan ee horumarka
Waraabiyo inta lagu jiro ubax. Ubax furan waa in aan marnaba loo waraabin sida habka uu biyaha u galo asaas ahaan - tani waxay keenaysaa in uu qulqulo. Si kastaba ha noqotee, ubax furan waa in aan lagu qasi karin adigoo ku buufinaya biyo, si ay u burburaan.
Xulashada ugu fiican waa in la fuliyo waraabin dheeri ah ee substrate ee dheri, ka dibna u daadi biyo diirinta 20 daqiiqo. Nidaamkan waraabinta waxaa loo yaqaannaa dhadhan ahaan.
Orchids ee dheriga dushooda waxaa lagu waraabiyaa dheriga: xididdada waxaa lagu rusheeyaa weel biyo leh diirimaad 15 daqiiqo (inta lagu jiro waqtigan nidaamka xididka ayaa la nadiifiyaa biyaha), si tartiib ah u rux oo ku noqo goobta.
Sidee biyaha loo waraabiyaa caleemaha yaraaday?? Warshad yar ayaa lagu waraabin karaa iyadoo la isticmaalayo hababka lagu sharraxay cutubka kor ku xusan, marka lagu daro, qaybta daaqsinka waxaa lagu buufin karaa iyadoo la isku biimeeyo. Haddii qolku yahay qoyaan kugu filan, waxaad isticmaali kartaa habka qoyaanka ee digsiga: geedka ayaa helaya uumiga, sida ku jirta deegaanka dabiiciga ah.
Sidee loo nadiifiyaa qalabka wax lagu qoro? Warshad aan ubax ahayn ayaa lagula talinayaa in ay qaaddo qubeyska kulul: waxay la mid tahay jawiga dabiiciga ah. Dhammaan siyaabaha waraabinta biyaha ayaa ku habboon qaybtaas.
Nitrogada buufinta waa suurto gal, laakiin maaha mid wax ku ool ah, maadaama qayb muhiim ah oo ka mid ah afkoda dhirta aan ubaxnayn lagu daboolo jilif.
Sidee loo biyo qaboojiyaa ka dib markii transplanting? Ka dib markii transplanting orchid u baahan tahay waraabin aan caadi ahayn, maadaama ay substrates kala duwan u nuugo iyo nadiifin qoyaan siyaabo kala duwan. Waxaad kaloo isticmaali kartaa bacriminta.
Sidee ayay qoyaanku u saameeyaan dhirta?
Fuuqbaxa xad dhaafka ah ayaa carqaladeeya nuugista caadiga ah ee biyaha iyo macdanta, sidaas darteed dhammaan hawlaha muhiimka ah ee ubaxa waa la carqaladeeyey. In badan oo sidaas xaaladaha qoyaan badan waxaa jira khatar aad u sareysa oo ah duufaan iyo horumarinta dulin. Ugu dambeyntii, dhirta ayaa dhiman doonta haddii aadan ciidda si joogto ah u qalin
Sidee faa'iido u lahaan kartaa?
Iyada oo waraabinta ku filan, xididdada ubaxa qallajiyey, iyo inta badan kiisaska orchid u dhinto. Si kastaba ha ahaatee, muuqaal xiiso leh waa awooda lagu koraan ubaxyada iyo ubaxyada ka hor inta dhiman. Sidaa darteed, haddii ay dhacdo in waraabinta ku filan, ubax ma aha at dhan tilmaame ah ee caafimaadka dhirta.
Sidee loo badbaadiyaa ubax leh xanaano qaldan?
Haddii ay dhacdo waraabinta ku filan, warshadu waa inay ahaataa mid aad u badan oo qoyan, haddii ay dhacdo qoyaan xad dhaaf ah, waxaa lagama maarmaan ah in la kordhiyo mudada u dhaxeysa biyaha. Si kastaba ha ahaatee, khaladaadka dheeraadka ah ee waraabka, dhirta ayaa u badan tahay in aan la badbaadin.
Wixii dib u soo kabashada ubaxa ee cayayaanka iyo cudurrada waxay ku daboolaan qubeyska kulul. Nidaamkan waxaa lagu sameeyaa musqusha, adigoo gacanta ku haya dheriga, sidaa darteed biyaha waa la miiray, kan kalena wuxuu ku shubay ubaxa qubeyska. Biyuhu waa inuu kululaa, laakiin ma gubayo, halkan waa inaad diirada saartaa dareenkaaga.
Caleemaha iyo substrate ayaa la waraabiyaa ilaa 3-5 daqiiqadood, ka dib markii phalaenopsis loo ogolyahay in la daadiyo illaa 20 daqiiqo. Kadibna ubaxa waxaa loo celiyaa meeshii caadiga ahayd.
Haddii ubaxa wali la waraabiyo biyo adag, dhexdhexaadinta tufaaxa leh kefir ama liin biyo leh waxay caawineysaa in la yareeyo saameynta - waxay ku dhaqi doonaan lakabka caleenta iyo substrate.
Qiyaastii quudinta phalaenopsis
Dheeraad ah Macdanta ayaa loo baahan yahay Orchid halka ay si firfircoon u sameyso caleemaha iyo burooyinkeeda. Bacriminta waxaa la fuliyaa inta lagu jiro waraabka, faafinta bacriminta biyaha, ilaa ubaxa ugu horeeya ee shaaca ka qaaday dhirta: haddii aad sii wadato bacarimiso, ubaxyada ayaa sii wadi doona waqti hore.
Phalaenopsis waa in la quudiyo oo kaliya kaliya Bacriminta orchid, isku dhafka ubaxyo kale ma shaqeyn doono.
Waraabinta waa qayb muhiim ah oo ka mid ah caafimaadka iyo quruxda orchidsography.. Waxaan rajeyneynaa in talooyinka maqaalkan ka caawin doonaa beerista this geedka qurux badan oo jilicsan.